Kolontsaina ao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô - Wikipedia
Kolontsaina ao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô
(tonga teto avy amin'ny Kolontsaina ao amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô)
Ny kolontsaina ao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô, izay ahitana mponina miisa any amin' ny 86 000 000, dia ahafaha-mitaratra ny fahasamihafan' ireo foko anjatony maro ao amin' io firenana io sy ny fomba amam-panaony. Nanomboka tamin' ny fiafaran' ny taonjato faha-19 dia niova ny fomba fianan' ny mponina vokatry ny fanjanahan-tany, ny tolona ho an' ny fahaleovan-tena, ny Ady Lehibe voalohany sy faharoa. Na dia izany aza dia voatahiry amin'ny ankapobeny ny kolontsaina nentim-paharazana ao Kôngô.
2 Ny fivavahana
2.3 Ny fivavahana hafa
3 Ny fiteny
3.1 Fiteny eorôpeana
3.2 Fiteny afrikana
Ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô dia ahitana vondrom-poko fito sy zana-poko mihoatra ny telonjato. Ny vondrona lehibe indrindra dia ny vondrona banto: ny Kôngô (Kongo), ny Bateke (Bateke), ny Loba (Luba), ny Londa (Lunda) ary ny Koba (Kuba). Ao avaratra no ahitana ny Nilôtika sy ny Pigmea (izay monina any amin’ ny faritra be ala).
Eglizy katôlika ao Lubumbashi
Ny ankamaroan’ ny mponina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia Kristiana ka ny 50 % amin' izany dia Katôlika ary ny 20 % Prôtestanta. Ny fivavahana manafangaro singa avy amin’ ny kristianisma sy ny fivavahan-drazana afrikana, dia arahin'ny 13,5 %n'ny mponina, ka saika izy rehetra (13 % ankehitriny) ireo dia manaraka ny kimbangisma, fa ny hafa manaraka ny jamaa sy ny Kitawala. Ny fivavahana kristiana hafa dia arahin'ny 1 %n' ny mponina (Olomasin' ny Andro Farany, sns).
Ny fivavahana silamoHanova
Vitsy anisa ny Mizolmana, izay laharana faharoa aorian'ny Kristiana, raha ny isan' ny mpino no heverina. Tsy fantatra marina ny isan' izy ireo: ny Pew Research Center dia manambara fa 1,5 %n' ny mponina ao amin' ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô izany, nefa ny World Factbook an' ny CIA (Etazonia) dia milaza fa 10 % izany. Ny 50 %n' izy ireo dia Sonita fa ny 10 % kosa Siita ary ny 15 % dia Ahmady.
Ny 11,5 %n' ny Kôngoley dia manaraka ny fivavahan-drazana afrikana, izay mivavaka amin'ny Razana sy mino ny herin' ny fanahy eny amin' ny natiora ary mamonjy ombiasa sy ny sahala amin' izany hafa. Ahitana olona vitsy manaraka ny jodaisma sy ny hindoisma ary ny bahaisma ka an-tanàn-dehibe misy raharaham-barotra ahitana azy ireo.
Sarintany maneho ny faritra itenenana betsaka ireo fiteny afrikana ao amin' ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô
Ny teny frantsay no teny ôfisialin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô no firenena miteny frantsay misy mponina betsaka indrindra maneran-tany, ary tamin'ny taona 2016 dia Kôngôley miisa 37 000 000 any ho any (47 %n' ny mponina) no mahay mamaky teny sy manoratra amin' ny teny frantsay.
Misy fiteny tompon-tany miisa 220 ny ao amin’ io firenena ka ny ankamaroan’ ireo dia fiteny banto, nefa ny efatra no natao fitenim-pirenena ifaneraseran’ ny mponina, dia ny fiteny soahily, ny fiteny lingala, ny fiteny kikôngô ary ny fiteny tsiloba. Ny fiteny soahily dia tenenin’ny 35 %n’ ny mponina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ao ao amin’ ireo ivontoerana lehibe sy ao amin’ ny faritra atsinanana (Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, ary ny faritra atsimo atsianan’ ny faritany Orientale). Ny fiteny lingala dia tenenin’ ny 30 %n’ ny mponina, ao Kinshasa sy ao amin’ ny faritanin’ i Bandundu, ao amin’ ny faritanin’ i Équateur ary ao amin’ ny faritany Orientale. Ny fiteny kikôngô izay tenenin’ ny 15 %n’ ny mponina, ao Bas-Congo. Ny fiteny tsiloba izay ampiasain’ ny 15 %n’ ny mponina, ao amin’ ny faritany roa ao Kasaï.
Tamin’ ny taona 2005 dia nahatratra 89,8 %n’ ny mponina no mahay mamaky teny sy manoratra. Zaza telo amin’ ny efatra (75 %) no tafiditra an-tsekoly tamin’ ny taona 1980. Na dia izany aza, ny fifanolanana ara-pôlitika tamin’ ny taona 1990 dia niteraka fihenanan’ ny fankanesan’ ny zaza ny an-tsekoly tamin’ ny faritra maro, noho izany dia nidina ambanin’ ny 40 % isan’ ny zaza 12 hatramin’ ny 17 taona mianatra. Na dia ambany dia ambany aza ny tahan' ny fidirana an-tsekoly any amin’ ny ambaratonga fahatelo dia ahitana oniversite telo ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô izay miorina ao Kinshasa sy Lubumbashi ary Kisangani.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolontsaina_ao_amin%27_ny_Repoblika_Demôkratikan%27_i_Kôngô&oldid=1040204"
Dernière modification le 23 Novambra 2021, à 13:33
Voaova farany tamin'ny 23 Novambra 2021 amin'ny 13:33 ity pejy ity.